မှုန်ဝေနေတဲ့ စိတ်အစုံက ...စာလုံးတွေစီရရီ လို့ ..မှင်အိုးတွေ မှောက်ချလိုက်စဉ်ခဏ ...ဖြတ်ခနဲ ဆို....ကြယ်တွေကြွေတာလား လျှပ်စီးလက်တာလား . ပိုးစုန်းကြူး ဖြတ်ပျံသွားတာလား.. ဧကန်က ကလောင်တံနဲ့ နေကြာရိုး ၊ နေကြားရိုးနဲ့ ကလောင်တံ အရောင်ပြန်နေကြစဉ်ခဏ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
အကယ်၍ မင်းအသိုင်းအ၀ိုင်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပြီး ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့်လို့ ၀ိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြတဲ့အခါ မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်......
အကယ်၍ အားလုံးကမင်းကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ကို နားလည်စွာ ခွင့်လွတ်ရင်းနဲ့ မင်းကိုမင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်...
အကယ်၍ စောင့်သင့်တဲ့အချိန်ကို စောင့်နိုင်ပြီး အဲဒီအတွက်လည်း မမောမပန်း နေနိုင်မယ်ဆိုရင်.....
ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့အကြောင်း မဟုတ်မတရား မုသားစကား ကြားရတဲ့အခါ မင်းကလည်း အလိမ်အညာတွေနဲ့ မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်....
ဒါမှမဟုတ် မင်းကို လူတကာက ၀ိုင်းဝန်းမုန်းတီးတဲ့အခါ မင်းကလည်း အမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူးဆိုရင်.....
အကယ်၍ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေဟာ မင်းအပေါ်မလွှမ်းမိုးစေဘဲ စိတ်ကူးနိုင်မယ် ဆိုရင်...ပြီးတော့ အတွေးအခေါ်စိတ်ကူးတွေဟာ မျှော်မှန်းချက်သက်သက်သာ မဖြစ်စေဘဲ တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်........
အကယ်၍ အောင်မြင်မှုသုခ နဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ တူညီသော လောကဓံတရားတွေပါလားရယ်လို့ ခံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်...
အကယ်၍ မင်းရဲ့အမှန်စကားတွေကို လူလိမ်လူညာတွေက လှည့်စားပြောင်းလဲပြီး မုသားအဖြစ်ထောင်ခြောက်ဆင် ညစ်တဲ့အခါ မင်းဟာတည်ငြိမ်စွာနဲ့ နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်....
အကယ်၍ မင်းဘ၀ တစ်ခုလုံးပေးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် နဲ့ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့ တန်ဆာပလာ အရာရာနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်........
အကယ်၍ မင်းနိုင်ခဲ့သမျှတွေအားလုံး ကြွေတလှည့် ကြက်တခုံပမာ တစ်လက်တစ်ခါတည်းနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ပြီးတော့ အစကနေပြန်စနိုင်မယ် ဆိုရင် ပြီးတော့တစ်ခါ ဆိုးရွားတဲ့ကံကြမ္မာရယ်လို့ ဘယ်သောအခါမှ ညီးညူမနေဘူးဆိုရင်....
အကယ်၍ သူများတကာတွေ လုပ်ပြီးသွားကြလို့ အချိန်အတော်ကြာမှ မင်းအလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ မင်းတစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲ အားနဲ့မာန်နဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်....အဲဒီလိုပဲ မင်းမှာစိတ်အင်အားကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ အဲဒီစိတ်အင်အားကို ခိုင်မာစွာနဲ့ပဲ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်....
အကယ်၍ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မင်းဧကရာဇ်တွေနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်နေရပေမယ့် မာန်မာနသွေး မကြွဘူးဆိုရင်.....
အကယ်၍ ရန်သူကဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကဖြစ်စေ မင်းကို နာကျည်းအောင် မလုပ်နိုင်စေရင်.....
အကယ်၍ လူတိုင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားပေမယ့် စွဲလမ်းမှုသံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင်.....
အကယ်၍ တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိုင်တဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ် အဖြစ် အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်.....
မင်းဟာ အရာရာရှိတဲ့ အရာရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုဆုပ်ကိုင်လို့ အရာရာ ဘာမဆို မင်းစွမ်းနိုင်ပြီပေါ့...
အဲဒီတော့ မင်းဟာလည်း ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ပဲပေါ့......
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဘာသာပြန်ကဗျာအား ကျွနုပ်ကြိုက်နှစ်သကဲ့သို့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ခံစားစေရန် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ "
If you can keep your head when all about youAre losing theirs and blaming it on you;If you can trust yourself when all men doubt you,But make allowance for their doubting too:If you can wait and not be tired by waiting,Or, being lied about, don't deal in lies,Or being hated don't give way to hating,And yet don't look too good, nor talk too wise;
If you can talk with crowds and keep your virtue,Or walk with Kings---nor lose the common touch,If neither foes nor loving friends can hurt you,If all men count with you, but none too much:If you can fill the unforgiving minuteWith sixty seconds' worth of distance run,Yours is the Earth and everything that's in it,And---which is more---you'll beaMan, my son!
Posted by နေကြာရိုး at Tuesday, November 23, 2010
နေကြာရိုး နှင့် သူ၏စာမျက်နှာများ
Nay Gyar Yoe and His Pages (4)
အိပ်မက် ပေါ်က ရောင်စုံဆေးမင်စက်များ
မိဘ မောင်နှမတွေနဲ့ နေခဲ့ရတဲ့ဘ၀ကိုတမ်းတသူ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ဖို့ တမ်းတသူ။ ရေးချင်တာရေးဖို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်လည်းတမ်းတသူ။